Faah faahin:- Askari ka tirsan NISA oo nin ganacsade ah ku dilay duuleedka Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Askari ka tirsan NISA oo nin ganacsade ah ku dilay duuleedka Muqdisho
Askari ka tirsan ciidanka nabad-sugidda qaranka ee NISA ayaa habeenkii xalay nin ganacsade ah ku dilay duuleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan halka loo yaqaano Tabeelaha Sheekh Ibraahim.
Ganacsadaha la dilay oo magaciisa lagu sheegay C/kariin C/qaadir Axmed ayaa la sheegayaa inuu muran soo kala dhex galay isaga iyo askariga dilka u geystay, wuxuuna murankaasi keenay in ninkaasi ganacsadaha ahaa isla goobta lagu dilo.
Goob-jooge ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in dilka ganacsadahaasi uu yimid kadib markii uu muran soo kala dhexgalay askarigii dilka geystay iyo ninka ganacsadaha ahaa.
Askariga dilka geystay ayaa la sheegayaa inuu islamarkiiba goobta ka baxsaday, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi ka bilaabay howlgallo ay ku baadi-goobayaan askariga dilka geystay.
Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha dowladda Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan dilka loo geystay ninkaasi ganacsadaha ahaa.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya uu dil u geysto qof shacab ah, wuxuuna dilkaan kusoo beegmayaa xilli ay dowladda Soomaaliya digniin kasoo saartay dilalka ay inta badan ciidankooda u geystaan dadka shacabka ah.